JADWALKA OLOLAHA DOORASHADDA OO LAGU DHAWAAQAY IYO SIDA AY XISBIYADDU U KALA HOREEYAAN | Saxil News Network
JADWALKA OLOLAHA DOORASHADDA OO LAGU DHAWAAQAY IYO SIDA AY XISBIYADDU U KALA HOREEYAAN
Maalinta sabtida ee fooda inagu soo hayso oo ay bishu noqonayso 21-ka october ayuu si rasmi ah u furmi doonaa ololaha doorashooyinka madaxtooyadda Somaliland, taas oo ay ku loolami doonaan murashaxiinta xisbiyadda Kulmiye, wadani iyo UCID.
Sida ay shabakada wararka ee sagalnews soo heshay waxa ugu horeyn doona xisbiga mucaaradka ah ee UCID, Halka maalinta labaadna uu ku xigi doono Kulmiye oo ah xisbiga taladda somaliland haya, ugu dabayn Maalinta saddexaad waxa isna olololaha u yeelan doona xisbiga Waddani.
ololahan oo socon doona muddo 21 maalmood ah ayaa waxa uu marka uu xidhmo laba maalmood oo nasasho ah ka dib loo dareeri doonaa maalinta codbixinta.
xisbiyadda saddexda ah ee ku loolamaya doorashadda madaxtooyadda ayaa guclo orod ugu jira sidii ay u xero gashan lahaayeen dadweynaha codka leh, hasayeeshee waxa maalmahan dibada u soo baxday qabyaalad.
madax dhaqameedkii reeraha ayaa isaga dab qaadaya magaalooyinka waaweyn kuwaas oo fadhiyo la leh beelaha kale madax dhaqameedkoodii, waxaana ugu waynaa todobaadyadan ka dib markii madax dhaqameedka beelaha Galbeedka Hargeysa ay burco u tageen sidii ay wada xaajood ula yeelan lahaayeen madax dhaqameedka beelaha bariga burco oo markii dambe ay isku af garteen in ay u codeeyaan murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Kulmiye.
doorashada soo socota ee reer somaliland ay ku dooran doonaan madaxweynihii shanaad ee hogaaminaya somaliland ayaa waxa ilaa hadda cirka ku shareertay xiisada siyaasadeed.